သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင်အခမဲ့ဒေါသမီးကို DOWNLOAD - PROGRAM ကိုပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - 2019
စနစ်ကစွမ်းဆောင်ရည်အတွက်အလွန်အရေးကြီးသောအချက်တစ်ချက် - ကွန်ပျူတာ hard drive ကို၏အခြေအနေ။ အဆိုပါ hard drive ကို၏လုပျငနျးနဲ့ပတျသကျတဲ့သတငျးအခကျြပေးသောများစွာသော tools များအကြား, ဒေတာ output ကို၏ကြီးမားသောငွေပမာဏ CrystalDiskInfo အစီအစဉ်ကိုသွင်ပြင်လက္ခဏာ။ ဤလျှောက်လွှာကိုနက်ရှိုင်းတဲ့စိတ်ဖြာ S.M.A.R.T. -drives တွေကိုလုပ်ဆောင်ပေမယ့်တစ်ချိန်တည်းမှာအချို့သောအသုံးပြုသူများသည်ဒီ utility ကို၏ရှုပ်ထွေးပွေလီလှ၏စီမံခန့်ခွဲမှုနှင့် ပတ်သက်. တိုင်ကြား။ ရဲ့ CrystalDiskInfo သုံးစွဲဖို့ဘယ်လိုကြည့်ရှုကြပါစို့။
သင်ကွန်ပျူတာပေါ်မှာ run တဲ့အခါ, ဖြစ်ကောင်း CrystalDiskInfo အတွက်အစီအစဉ်ကိုပြတင်းပေါက်အောက်ပါမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖော်ပြပေး: "။ Disk ကိုမတွေ့ရှိ" ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, disk ကိုဒေတာများအားလုံးကိုလုံးဝအချည်းနှီးဖြစ်လိမ့်မည်။ အဆိုပါကွန်ပျူတာသည်လုံးဝမှားယွင်းသော hard drive ကိုအတူအလုပ်လုပ်လို့မရဘူးဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့သဘာဝ, ဒီအသုံးပြုသူများအကြားရှုပ်ထွေးမှုများကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ program ကိုအကြောင်းကိုဝေဖန်ပြောဆိုစတင်ပါ။
နှင့်အညီ, တကယ်တော့ထဲမှာ, disc ကိုအတော်လေးရိုးရှင်းတဲ့ဖြစ်ပါတယ်ရှာပါ။ ဒီအလုပျမီနူး၏အပိုင်းကိုသွား - "။ Advanced Search drives တွေကို" ပေါ်လာသော list ထဲမှာ "Tools များ", "အဆင့်မြင့်" ကိုရွေးချယ်ပါ, ပြီးတော့
ဒီလုပ်ထုံးလုပ်နည်း, အ disk ကိုများနှင့်ကအဓိက window ထဲမှာပေါ်လာသငျ့သညျအကြောင်းသတင်းအချက်အလက်ပြီးနောက်။
ကြည့်ရှုခြင်း disk ကို
အဆိုပါ operating system ကိုချက်ချင်းအစီအစဉ်စတင်ပြီးနောက်ဖွင့်လှစ်ခဲ့သောပေါ်မှ hard disk ကိုအပေါ်တကယ်တော့အချက်အလက်တွေအားလုံးကို။ တစ်ခုတည်းသောခြွင်းချက်အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်ထိုကိစ္စများဖြစ်ကြသည်။ အဆိုပါ hard drive ကိုသတင်းအချက်အလက်အပေါ်အောက်ပါပါဝင်နိုင်အစီအစဉ်များအားလုံးချက်ချင်းပြသသောအခါနိုင်အောင်ဒါပေမယ့်ပင်ထိုကဲ့သို့သောဂျအတူတစ်ချိန်ကတစ်ခုအဆင့်မြင့်ရှာဖွေမှုကို drives တွေကို run လုပ်ထုံးလုပ်နည်းဖျော်ဖြေဖို့လုံလောက်ပါတယ်။
Program ကိုနည်းပညာဆိုင်ရာသတင်းအချက်အလက်များ (disc ကိုအမည်, အသံအတိုးအကျယ်, အပူချိန်, etc) နှင့် S.M.A.R.T. -ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဒေတာနှစ်မျိုးလုံးကိုဖော်ပြပေးမှာဖြစ်ပါတယ်။ "ကောင်းသော", "အာရုံကို", "မကောင်းတဲ့" နှင့် "အမည်မသိ": program ကို Crystal Disk ကိုအင်ဖိုအတွက် hard disk ကို parameters တွေကိုများ၏ Display ကိုလေးရွေးချယ်စရာရှိပါတယ်။ ဤအသွင်ပြင်လက္ခဏာများတစ်ခုချင်းစီကိုသက်ဆိုင်ရာညွှန်ပြချက်အရောင်ပေါ်လာ:
"ကောငျး" - အပြာသို့မဟုတ်အစိမ်းရောင် (ရှေးခယျြသောအရောင်အစီအစဉ်ပေါ် မူတည်. );
"အာရုံစူးစိုက်မှု" - အဝါရောင်,
"ညံ့ဖျင်း" - အနီရောင်;
"အမည်မသိ" - မီးခိုးရောင်။
ဤရွေ့ကားခန့်မှန်းသီးခြားအတော်လေးတင်းကျပ် disc ကိုဝိသေသလက္ခဏာများနှင့်တစ်ဖွဲ့လုံးကတစျခုလုံးကို drive ကိုအဖြစ်ပြသထားပါသည်။
ရိုးရှင်းတဲ့စကား CrystalDiskInfo အစီအစဉ်ကိုအပြာရောင်သို့မဟုတ်အစိမ်းရောင်အပေါငျးတို့သ element တွေကိုခြေတစ်လှမ်းလျှင် - အားလုံးညာဘက်မောင်းထုတ်ရန်။ အဝါရောင်အတွက်မှတ်သားပစ္စည်းများနှင့်ပိုမိုအနီရောင်ရှိပါတယ်လျှင်သင်ပြင်းထန်စွာ drive ကိုပြုပြင်စဉ်းစားသင့်ပါတယ်။
သငျသညျအချက်အလက်များကိုကြည့်ချင်တယ်ဆိုရင်စနစ် drive ပေါ်တွင်မဟုတ်, နှင့်သင့်ကွန်ပျူတာသို့ချိတ်ဆက်တခြားသိုလှောင်ရေးကိရိယာ (ပြင်ပ disk တွေအပါအဝင်), သငျသညျမှာ "Disk ကို" မီနူးကို item နှိပ်ပါ, ပေါ်လာသော list ထဲမှာသင့်ပါတယ်လိုချင်သောမီဒီယာကိုရွေးချယ်ပါ။
, သော graphical ပုံစံအတွက် disk ကိုသတင်းအချက်အလက်ရှုမြင် main menu ကို "Tools များ" ၏အပိုင်းကိုသွား, ပြီးတော့ပေါ်လာတဲ့စာရင်းထဲကရွေးချယ်ဖို့, "ဇယား" ကိုရွေးချယ်ပါ။
ပြတင်းပေါက်မှာ, ဒေတာအချက်အလက်များ၏တိကျသောအမျိုးအစား, အသုံးပြုသူကြည့်ရှုရန်ဆန္ဒရှိသော်လည်းအရာများ၏အချိန်ဇယားကိုရွေးဖို့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
အဆိုပါအစီအစဉ်ကိုလည်းစဉ်ဆက်မပြတ် hard drive ကိုပြည်နယ်စောင့်ကြည့်, နောက်ခံစနစ်ဗန်းထဲမှာအလုပ်လုပ်ပါလိမ့်မယ်သူကို system ရဲ့ကိုယ်ပိုင်အေးဂျင့်အပေါ်ကို run ဖို့စွမ်းရည်ကိုထောက်ပံ့ပေး, ထိုသို့ပြဿနာတက်ပြပါလိမ့်မယ်သာလြှငျမက်ဆေ့ခ်ျကိုဖော်ပြရန်။ အဆိုပါအေးဂျင့်ကို run ဖို့, သင်ရုံ "Tools" မီနူးကို item သွားပြီး select လုပ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ် "(ပုအကြောင်းကြားစာဧရိယာ၌) Run ကိုအေးဂျင့်။ "
"အော်တို" ကိုရွေးချယ်ခြင်းတူညီတဲ့အပိုင်း "Tools" menu ကို, ၌, သငျသညျအပလီကေး configure လုပ်နိုင်ပါတယ်က system ကို startup မှာ run ဖို့ဆက်လက်မညျဖွစျကွောငျးထိုကဲ့သို့သောလမ်း CrystalDiskInfo ။
အဆိုပါ hard disk ကို၏စည်းမျဉ်း
ထို့အပြင်ခုနှစ်, CrystalDiskInfo ပလီကေးရှင်း hard disk ကိုစစ်ဆင်ရေးကိုထိန်းချုပ်ရန်အချို့နိုင်စွမ်းရှိပါတယ်။ , ဒီ function ကိုအသုံးပြုနိုင်သည် "Tools များ" ကိုပြန်သွားပြီး, "အဆင့်မြင့်" ကိုရွေးချယ်ပါ, ပြီးတော့ "AAM / အေပီအမ်ကစီမံခန့်ခွဲမှု" ဖြစ်ပါတယ်။
ရိုးရှင်းစွာဘက်ခြမ်းကနေ slider ကိုဆွဲအသုံးပြုပုံဆူညံသံများနှင့်ပါဝါ - သစ်ကိုပြတင်းပေါက်များတွင်သုံးစွဲသူနှစ်ဦးကို hard disk ကိုစွမ်းဆောင်ရည်မှတက်ကိုထိန်းချုပ်နိုင်ပါတယ်။ အဆိုပါ hard drive ကို၏ power supply ၏စည်းမျဉ်းလက်ပ်တော့ပိုင်ရှင်များအတွက်အထူးသဖြင့်အသုံးဝင်သည်။
ထို့အပြင်, တူညီတဲ့အပိုင်း, "အဆင့်မြင့်" ၌, သင် "အော်တိုချိုးကွေ့ AAM / အေပီအမ်က" ရွေးနိုင်သည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, program ကိုသူ့ဟာသူဆူညံသံနှင့်အာဏာပေးဝေရေး၏အကောင်းဆုံးတန်ဖိုးများကိုဆုံးဖြတ်ရန်ပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ CrystalDiskInfo အစီအစဉ်ကိုသင် interface ကိုအရောင် setting ကိုပြောင်းလဲနိုင်သည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့, သင် Menu ထဲမှာ "View" tab ကိုထည့်ပါ, သုံးယောက်ဒီဇိုင်းရွေးချယ်မှုများမဆိုရွေးချယ်သင့်ပါတယ်။
ထို့ပြင်လည်းမီနူးထဲမှာသင့်လျော်သော option ကိုကလစ်နှိပ်ခြင်းအားဖြင့်ဒါခေါ် "အစိမ်းရောင်" mode ကိုအဲဒီမှာပါဝင်နိုင်ပါသည်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, အညွှန်းကိန်းပုံမှန်လည်ပတ် disk ကို parameters တွေကိုတစ်ဦးက default အဖြစ်, အပြာထဲမှာဖော်ပြပါတယ်နှင့်အစိမ်းရောင်မည်မဟုတ်ပါ။
သငျသညျသူ့အလုပ်ဒါမှမခက်ခဲသည်ကိုနားလည်သဘောပေါက်ရန်, အင်တာဖေ့ CrystalDiskInfo လျှောက်လွှာအတွက်အပေါငျးတို့သသိသာရှုပ်ထွေးမှုများကြားမှတွေ့နိုင်ပါသည်အဖြစ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်တစ်ကြိမ်အချိန်သင်ယူမှုအခွင့်အလမ်းအစီအစဉ်မှာဖြုန်းပြီးနောက်ကနောက်ထပ်ဆက်သွယ်ရေး၌သင်တို့ကိုအဘယ်သူမျှမကပိုအခက်အခဲဖြစ်လိမ့်မည်။
ဗီဒီယို Watch: R Zarni - Ma Way Bu (နိုဝင်ဘာလ 2019).